Izitofu ze-Bioethanol: okuhle nokubi | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 19/04/2022 12:00 | Ikhaya Eliluhlaza
Ngokomqondo, igama elithi ikhaya limele indawo efudumele yomndeni, indawo lapho sizizwa sikhululekile futhi sivikelekile. Ukufakwa kweziko, okungaba ukhuni noma i-bioethanol, kusinika imfudumalo nokusha, okusivumela ukuba sibe nendawo yokuhlangana ekhululekile nethule. Ngokwesiko, izindawo zokucima umlilo bezibaswa izinkuni, futhi ukuba nesinye kunezinzuzo kanye nokubi. Zikhethwa ngenxa yokushisa ezikunikezayo, nokho okubi okuyinhloko ukuthi izinkuni ezivuthayo zivame ukukhiqiza intuthu nomlotha, okungabangela iphunga elibi kanye nokungahambi kahle ekhaya. I izitofu ze-bioethanol Banobuhle nobubi obuhlukile okufanele bacatshangelwe.
Ngenxa yalesi sizathu, sizonikezela lesi sihloko ukuze sikutshele ukuthi yiziphi izinzuzo nezingozi eziyinhloko zezitofu ze-bioethanol.
2 Izitofu zeBioethanol
3 Ingabe izitofu ze-bioethanol ziyashisa?
4 Izinzuzo nezingozi zezitofu ze-bioethanol
5 Ingabe ziphephile?
Lezi izitofu ezisebenzisa i-bioethanol noma i-ethanol njengophethiloli. Kuthathwa njengomkhiqizo wemvelo ngoba ukushiswa kwawo akungcolisi imvelo njengamafutha ezinto ezimbiwa phansi. Itholakala ngokucubungula izinto ze umthombo ovuselelekayo, njengommbila, umoba, amabele, amazambane kanye nokolweni.
Iqiniso liwukuthi uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zamafutha avamile, azikho izifundo ezibonisa inzuzo yayo yamandla, njengoba izindlela zamanje zokukhiqiza i-bioethanol zidinga amandla amakhulu avela kumafutha ezinto ezimbiwa phansi uma kuqhathaniswa namandla atholakala emafutheni akhiqizwayo.
Akudingi noma iyiphi idivayisi ukukhipha imihwamuko kawoyela, ngakho-ke ingafakwa kunoma iyiphi Igumbi elingaphezu kwama-cubic metres angama-25, ngaleyo ndlela kuqinisekisa ukungena komoya okuvamile. Noma yiliphi ikhaya lidinga ukungena komoya okuvamile nsuku zonke, imizuzu eyi-10 yomoya omusha ngosuku yanele.
Ukusebenza kwayo kulula. Vele ungeze uphethiloli phezulu kumaki aboniswe umenzi. Umshini wokushisa kufanele uvalwe ngokuphelele futhi upholiswe phansi, uqaphele ukuthi ungachithi isitsha noma uchithe i-bioethanol. Ungakwenza ngefaneli futhi uhlanze ngendwangu ukuze ugweme ukuchitheka. Ukukhanyisa indawo yomlilo, vele usondele ekukhanyeni noma ufanise ngokucophelela, njengoba ukuchithwa okuncane kujwayelekile.
Inkinga yokungcoliswa kwemvelo isenza sifune izinto zokubasa ezingenabungozi kangako ekushisiseni kwethu. Ngokuhamba kweminyaka I-bioethanol isiphenduke uphethiloli odumile ezindlini. Ngakho-ke, kunzima ukukhetha ukuthi yiziphi izitofu ezingcono kakhulu ze-bioethanol, ezinikezwe amamodeli azo amaningi emakethe.
Uma ufuna ukuthenga isitofu se-bioethanol kufanele ubheke imingcele eminingana ezocacisa ikhwalithi yomkhiqizo. Okokuqala ukusetshenziswa. Umgomo ojwayelekile wokuthenga ngu babe nokufudumeza ngokwezomnotho kodwa ngaphandle kokulahlekelwa izinga. Izindleko zesitofu noma iziko yinto ebalulekile okufanele icatshangelwe. Ukusetshenziswa kwe-bioethanol kuncike kusayizi wesitofu, inani lezimbawula kanye nokuvulwa komlilo.
Enye ipharamitha okufanele siyicabangele ingamandla. Uma iziko linamandla, yilapho into esetshenziswayo izoba namandla amaningi. Kungcono ukuba nokulinganisela okuhle phakathi kwamandla nokusetshenziswa.
Ekugcineni, ucezu olubalulekile lolwazi ubukhulu. Uma umkhiqizo okukhulunywa ngawo umkhulu, uzowusebenzisa kakhulu. Lokhu kusenza sisuke kulobu budlelwano phakathi kwamandla nokusetshenziswa. Ngakho-ke, kufanele ukhethe isitofu esilingana nobukhulu bekamelo esifuna ukulishisa.
Ingabe izitofu ze-bioethanol ziyashisa?
Izindawo zomlilo ze-Bioethanol zinikeza uhlobo lokushisa nge-convection. Lokhu akukwazi nje ukushisisa igumbi esikulo, kodwa futhi kungalungiswa kwamanye amagumbi. Akuvamile ukusetshenziswa njengokushisa okuyinhloko.
Zenzelwe ukuthi zibekwe emakamelweni lapho sichitha khona isikhathi esiningi. Kuye ngamandla nosayizi bazo bazoshisa kakhulu noma ngaphansi. Amandla ajwayelekile ezindaweni eziqhuma umlilo ngu-2 KW. Ngala mandla singashisisa igumbi elingamamitha-skwele angama-20. Ngale ndlela, kuye ngobukhulu bekamelo lethu, singakwazi ukwazi ukuthi yimaphi amandla okuthenga.
Izinzuzo nezingozi zezitofu ze-bioethanol
Ukusetshenziswa kwalezi zinsimbi kunezinzuzo kanye nokubi.
Lezi izinzuzo zayo:
Ziyimvelo futhi kulula ukuyifaka.
Awadingi ama-extractors noma amashubhu okungenisa umoya.
Izinga labo lokushisa lifinyelelwa ngokushesha.
Baletha idizayini eyengeziwe ekhaya.
Aphephile futhi kulula ukuwacisha.
Phakathi kokushiyeka kwayo sithola:
I-Bioethanol ibiza kakhulu.
Nakuba ingakhiphi intuthu noma umlotha, kodwa ikhipha iphunga elibonakalayo.
Ikhono lokushisa lilinganiselwe. Izinga le-oxygen elanele kufanele libe khona ukuze kugwenywe ukugxila okuphezulu kwe-CO2.
Ibanga elincane okufanele ube nalo efenisha liyimitha elilodwa.
Odabeni lwemililo nokufudumeza, umbuzo uhlala uphakama ukuthi uphephile yini. izitofu ze-bioethanol baphephe impela, njengoba ukuvalwa kwayo kulula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amamodeli amaningi anezivikeli ezithile zamalangabi ezisiza ukuthi singashi ngephutha.
Izinga layo lengozi liphansi kakhulu kunezinkuni ezivamile, njengoba zingekho izinhlansi noma izingodo ezivuthayo. Ukuze isitofu sethu se-bioethanol siphephe ngokuphelele, kufanele sihloniphe ibanga lokuphepha lemitha elilodwa.
I-Bioethanol kufanele igcwaliswe njengoba isetshenziswa. Kunezinhlobo ezahlukene kanye nemikhiqizo ye-bioethanol. Ngokusho izinga eliphakeme elinalo, amandla okushisa azoba nawo, ngaphezu kokukhipha iphunga elincane.
Ukusetshenziswa kwe-bioethanol kuncike ngokuphelele emandleni eziko kanye nesikhathi sokukhanyisa. Ushimula ngamunye unomthamo othize wethangi. Kuye ngokuthi yini engakwazi ukubeka, ukuvutha kuzohlala isikhathi eside noma ngaphansi.
Esinye sezici okufanele sicatshangelwe lapho udla i-bioethanol ubukhulu belangabi nembobo yokuphuma. Ivamise ukusha phakathi kuka-0,20 no-0,60 amalitha e-bioethanol ngehora. Kungashiwo ukuthi lokhu ukusetshenziswa okujwayelekile, ngakho-ke ngelitha likaphethiloli singaba nelangabi ngamandla aphakathi nendawo phakathi kwamahora ama-2 nama-5.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nobuhle nobubi bezitofu ze-bioethanol.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Ukonga amandla » Ikhaya Eliluhlaza » Izitofu zeBioethanol